Archive du 20180201
Voahangy Rajaonarimampianina Vadina filoha be mistery
Hafa raha samy vadina filoham-pirenena nifanesy teto amin’ny firenena i Voahangy Rajaonarimampianina, vadin’ny filoha ankehitriny.
Hahafaha-mandroba an’i Madagasikara Miala any indray ny korontana 2018…
Mananontanona indray ny korontana sy ny krizy eto amin’ny firenena, raha tsy misy ny fitsipi-dalao mazava sy ny fifandaminana mialoha ny fifidianana, izay hatao amin’ity taona ity raha tsy misy ny fiovana.
Potika ny fiarahamonina Mirongatra ny herisetra sy ny vono olona
Mirongatra ny herisetra ary mahavita mandatsaka aina mihitsy ireo olon-dratsy. Tena lasa biby toetra sy lian-dra fa tsy vitan’ny mangalatra sy mandroba fotsiny. Nisy ny fakan-kevitra natao tamin’ny mpitandro ny filaminana, mpiantsehatra mivantana sy mandray an-tanana ny fanadihadiana hoe : inona tokoa no mety mahatonga izany ?
“Fisandratana 2030” Fandrebirebena saim-bahoaka
Mbola mitana ny sain’ny maro ilay «Fisandratana 2030 », ambara fa vinam-pampandrosoana hoentin’ny filoha ankehitriny Hery Rajaonarimampianina hampisandratra an’i Madagasikara.
Miasa ho anao ny fanjakana Minisitera isanisany mivonona amin’ny fifidianana
Mihetsiketsika tampoka ny fitondram-panjakana tato ho ato amin’ny fanarenana sy fanamboarana fotodrafitrasa eto an-drenivohitra toy ny farihin`Anosy,
Ny Rado Rafalimanana Mivoy ny tetikasa « VATOEKA »
Noho ny fahatsapana ny fananan’ny Malagasy manampahaizana maro sy loharanon-karena voajanahary tsy hita noanoa dia nandray andraikitra ny ONG Ny Fanahy Maha Olona fa hikaroka izay ahafahana manome lanja ireo talenta isan-karazany ananan’ireo tanora malagasy,
Fandinihana ny lalàm-pifidianana Hivory tsy ho ela ny parlemanta
Ho avy ato ho ato ny fivoriana tsy ara-potoan’ny antenimieram-pirenena handinihana ny lalàna mifehy ny fifidianana.
Manameloka ihany, manameloka hatrany
Aaah! Jean aan! Manakory ianareo? Aleo tonga dia vantanina kosa rangahy fa mankaleo be ilay revinareo aa! Aiza moa ny tanana no handroso? Atrikasa dia velankevitra dia fikaonandoha dia inona koa?
Ambohibao Antehiroka « Epicerie » maromaro mety hakatona
Nanao bemidina in-droa miantoana teny Ambohibao Antehiroka ny mpiasan’ny minisiteran’ny varotra etsy Ambohidahy tato anatin’ny iray volana teo izay.
Hani-masaka eto an-drenivohitra Be ny laoka kanefa midangana ny vidin-kena
Anisan’ny mampitaraina fatratra ny rehetra amin’izao ny fiakaran’ny vidim-piainana. Ankoatra ny vary dia mila tsy ho azo vidina intsony ihany koa ny hen’omby.
Mpandrefy tany mpahay eto Madagasikara Misy mitady hanakorontana
Misy mitady hanova sahady ilay lalana 2011/0015 mifehy ireo mpandrefy tany mpahay (geomètre) na dia mbola tsy niasa akory aza, raha araka ny fanazavan-dRasamimanana Rolland omaly, tompon’andraikitry ny serasera eo anivon’ny holafitry ny mpandrefy tany mpahay eto Madagasikara.
Taorian’i Cébile Tsy mbola atahorana ny rivodoza manaraka
Oram-pahavaratra ihany no mirotsaka amin’izao fotoana izao raha ny fanazavan’ny avy eo anivon’ny sampana famantarana ny toetr’andro.
Ady tany ao Salazamay-Toamasina Manjaka ny didin’ny be sandry
“Tsy tanin’ny orinasam-pifandraisan-davitra ‘’Telma’ intsony io tany eto Salazamay atsimo io.
Ady tany eny Ambohitrakely Tsy milefitra ny fokonolona
Mitohy hatrany ny tolon’ireo mponina eny amin’ny fokontanin’Ambohitrakely, ampitan’ny toby miaramila etsy Betongolo, manoloana ny fanerena olona hiala izay efa nonina sy nanajary ny tany hatramin’ny taona 1982, raha ny fazavana.
Ravalomanana sy ny OIF
Tonga nitsidika ny filoham-pirenena teo aloha sady filoha nasionalin’ny Tiako i Madagasikara,Marc Ravalomanana teny amin’ny trano fonenany teny faravohitra omaly ny delegasionina avy amin’ny fikambanan’ny Frankofonia (OIF) notarihan’i Djibou Salou, filohan’i Nigeria teo aloha.
Famaranana ny Chan 2018 Nigeria sy Maroc no hifanandrina
Nidelira fandresena ny tao amin’ny kianja Mahommed V any Casablanca tamin’ny nahazoan’ny ekipan’ny Lions de l’Atlas ny fandresena nanoloana ny Chevaliers de la Méditerranée Lybiana 3-1 omaly alarobia 31 janoary 2018.
Ady totohondry Mijanona amin’ny toerany i Gégé Bosco
Noraisin’ny talen’ny fanatanjahantena eo anivon’ny minisiteran’ny fanatanjahantena Malagasy nihaona taminy tamin’ny talata 30 janoary ireo filohan’ny ligim-paritry ny ady totohondry miisa 11 rehefa tapitra ny 48 ora niangavian'izy ireo ny Komity Olimpika Malagasy sy ity
Rugby seksiona Antananarivo Renivohitra Miato kely aloha taorian’ireo lalao ampahavalon-dalana faharoa
Tontosa tamin’ny an-tsakany sy an-davany ireo lalao rugby ampahavalon-dalana andiany faharoa nokarakarain’ny seksiona Antananarivo Renivohitra notontosaina tetsy amin’ny kianja Malacam Antanimena ny alahady 27 janoary 2018 teo.
Mba henoy ny feon’ny fieritreretana e
Malaza ho olon’ny fihavanana sy ny fifampiresahana ny Malagasy, saingy efa tonga amin’ny fifampisoparana sy ny fifamotehana mihitsy noho ny lonilony sy ny hambom-po politika.
Aretina pesta Tokony ho mailo hatrany ny rehetra, hoy ny minisiteran’ny fahasalamana
Mbola mitohy hatrany ny fanentanana tanterahin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka mikasika ny ady atao amin’ny aretina pesta amin’izao.
Orinasa AAA-Tiko Miantso vonjy ny mpiasa
Nanao hetsika nentina nanehoana ny tsy fankasitrahana ny fanakatonana ny orinasa AAA-Tiko ireo mpiasan’ny Magro teto Antananarivo omaly,
Oniversiten'i Mahajanga Nitsefotra ny fifampidinihana
Tsy nahomby ny fampifanatonana mivantana ny tompon' andraikitry ny oniversite sy ny mpianatra nataon'ireo solontenam-panjakana tao Mahajanga notarihin'ny Préfet Ravelomahay Lahiniaina Fitiavana sy ireo lehiben'ny OMC omaly maraina, nokasaina hamahana ny olan’ny oniversiten'i Mahajanga.
Omaly dia tafiakatra 9.600.000 ny olona izay nanoratra anarana anaty lisi-pifidianana, raha araka ny fanazavan’ny CENI. Mbola hanao ny fanaraha-maso izany izy ireo alohan’ny hamoahana ny lisitra farany amin’ny 15 aprily ho avy izao.
Fonjan’i Guantanamo Mitohy ny asay, hoy i Donald Trump
Nanapa-kevitra ny mbola hampiasa hatrany ny fonaj’I Guantanamo mba hihazonana ireo olona sokajiana ho mpanao asa fampiorohoroana ny filoha Amerikana Donald Trump; efa nomeny baiko momba izany ny minisitry ny fitsarana Jim Mattis ary efa voasonia ny didim-panjakana,
Canal + Madagascar Lasa 5 000 Ariary ny Décodeur
Niampy 3 indray nanomboka ny 23 janoary ny “chaînes” vaovao atolotry ny Canal + Madagascar ho an’ ny mpanjifany dia ny TFX, ny Nollywood Tv Epic ary ny A+Sport.
Fiainana antonony Mila 500 000 Ar isam-bolana ny tokantrano iray
155 523Ar ny karama farany ambany eto Madagasikara raha toa ka 3 715 000Ar ny karaman’ny minisitra araka ny tatitra nataon’ny Transparency International Initiative Madagascar (TIIM).